Vaovao - Fantsom-pitaterana Florescence dia nitazona hetsika isan-taona teo amin'ny ranomasina
Fantsom-pitaterana Florescence dia nitazona hetsika isan-taona momba ny baribariana amoron-dranomasina
Ny fantsom-boaloboka dia nitazona ny hetsika barbecue amoron-dranomasina isan-taona tamin'ny sabotsy. Niara-nilalao izahay, nanao barbecue, ary nihira sy nandihy manodidina ny afon-dasy. Mpinamana vazaha maro koa no mandray anjara ho azy amin'ny lalao sy hetsika ataontsika. Tianay ny vokatray sy ny asanay, tianay koa ny lanitra manga, ny rahona fotsy, ny ranomasina, tianay ireo mpiara-miasa mifanampy, tianay ny fianakavianay Florescence mafana hatrany, tia bebe kokoa ireo sakaizanay sy mpiara-miasa avy any lavitra avy lavitra. Hetsika lehibe ity ary manantena anao hiaraka aminay amin'ny taona ho avy!
Florescence tubes dia manantena ny hananan'ny mpanjifa maro kokoa hitsidika ny tanànantsika sy ny orinasanay, ary hanana fotoana hiarahana aminay hilalao lalao, hifankalala bebe kokoa ary hiara-miala voly, manantena ny hitazona orinasa lavitra. Mandritra izany fotoana izany dia hamorona fotoana bebe kokoa handehanana any amin'ny tanànan'ny mpanjifa sy ny orinasa izahay hifandray ary hahafantatra bebe kokoa izay ilain'izy ireo, hanatsarana sy hanitarana ny laharan'ny vokatra sy ny kalitaon'ny vokatra sy serivisinay. Manantena ny ho avy mamirapiratra vaovao miaraka amin'ny mpanjifa miaraka.
Qingdao Florescence Co., ltd dia mpanamboatra fantsom-pivoarana anaty manana traikefa maherin'ny 26 taona. Ny vokatray dia ao anatin'izany ny fantsom-bokatra anatiny ao anaty lava ho an'ny fiara, fantsom-pamokarana injeniera ary kapila vita amin'ny fingotra sns. Ny orinasanay dia misy mpiasan'ny 300 (ao anatin'izany ny injeniera zokiny 5, mpiasa matihanina sy ara-teknika 40 sy antonony) .Ny orinasa dia orinasa lehibe izay maoderina feno fikarohana sy fampandrosoana, fanamboarana, varotra ary serivisy. Ny vokatray dia atolotra any amin'ny firenena 20 mahery manerana an'izao tontolo izao, ankafizin'ny mpanjifa anatiny sy ivelany. Ankoatr'izay, nandalo ny fankatoavana ISO9001: 2008 izahay ary manana rafitra fitantanana maoderina sy siantifika ihany koa izay manome vokatra avo lenta sy serivisy tompon'andraikitra. Manantena izahay ny hametraka fifandraisana ara-barotra maharitra miaraka amin'ny mpanjifanay.